Ungaklinywa yizindleko zomshwalense kulesi sikhathi
Ababhekele ezemishwalense i-South African Insurance Association (SAIA) bathi akulindelekile ukuthi izinkampani zemishwalense ziqinise isandla nemithetho ngalesi sikhathi esinzima kangaka kubathengi futhi bayagqugquzela nabo ukuthi uma ubona unenkinga xhumana nomshwalense wakho uxoxe nawo.
UKUHLASELA kobhubhane lweCovid-19 kuphazamise izimboni eziningi kwaphazamisa nemiholo yabantu abaningi. Enye into eklinya abantu ngalesi sikhathi izindleko zomshwalense nngoba kwabanye umsebenzi uphelile abanye bancishiselwa umholo.
Imishwalense ebalulekile nekhokhelwa abantu nokungelula ukuhlala ungayikhokhele noma ubhekene nayiphi ingcindezi kwezezimali ingase ingakhokheleki kwabaningi nokuyinto izinkampani okuthiwa kufanele ziyilindele.
Zikhona ezinye izinkampani zemishwalense njengo-Outsurance ezizisukele zona zanciphisa imali ekhokhwa amakhasimende azo ngo-15% okungenye yezindlela yokuwaphungulela umthwalo wezindleko.
Imishwalense evame ukuthathwa kakhulu yeyesikhashana okuthiwa yi-short-term insurance njengowezikweletu, owendlu, owemoto, iselula, owebhizinisi nezinkampani ezenza ngaphansi kuka-R35 million ngonyaka.
Okhulumela iSAIA uNksz Tessa Kerspuy uthe nezinkampani kulindeleke ukuthi ziwazwele amakhasimende azo ngalesi sikhathi. Mayelana nenani noma isaphulelo umuntu angasithola ngesikhathi sikathaqa uthe lokho kuzolawulwa isivumelwano esiphakathi kwekhasimende nenkampani.
“Konke kuncike kakhulu kwinkontileka yomuntu asuke enayo nenkampani. Indlela okuvunyelwana ngayo izokwehluka ngokwenkontileka yomuntu kanjalo nezinkampani ngokuhlukana kwazo. Siyabagqugquzela abantu baxhumane nezinkampani ezizokwenza konke okusemandleni ukubasiza ngokuhlukana kwezimo zabo,” kusho uNksz Kerspuy.
Nakulabo abadinga ukuhlaba ikhefu bangakhokhi izikweletu zabo okungenani izinyanga ezimbalwa uthe kuyefana kusetshenziswa indlela efanayo yokubheka udaba lwekhasimende ngalinye nenkontileka yalo.
Echaza kabanzi ngemishwalense ethathwa njengeyesikhashana njengomshwalense wemoto, iselula nokunye, uthe kusuke kuyinkontileka ehambisana nemihlomulo ezokwazi ukuba usizo uma kwenzeka kukhona okukwehlelayo mayelana nale nto oyikhokhelayo. Le mihlomulo ithathwa njengeyezinto ezisuke zisengozini, nokwenza imishwalense ithathwe njengeyokuvikela lezo zinto.
UNksz Kerspuy uthe ukukhokhela umshwalense kusuke kungasho ukuthi ngeke kukwehlele okubi kodwa uma into yakho ilahleka noma intshontshwa ngeke uyikhokhele imali egcwele ngokulahleka kwayo.
Owesifazane osebenzisa iMomentum uthe ubengakazenzi izinhlelo nomshwalense wakhe ngoba beyivele seyenyukile imali okufanele ayikhokhe nyanga zonke. Le mali inyuke ngokwesivumelwano esibhalwe phansi, kodwa ngenxa kathaqa umshwalense wakhe uzoba nezinguquko ezingcono ngokwakhe. “ Ngithole i-SMS engazisa ukuthi ngizobuyelwa * -10% wemali engiyikhokha nyanga zonke. Ngikhokha * -R500 nemali okwamanje, ngokwe-SMS bazongibuyisela le mali emuva kwesonto ngoba bese bevele beyibambile,” kusho owesifazane.
Kubathengi abazoba nezinkinga zomshwalense ngalesi sikhathi ningakhathazeki ngoba umxazululi wezinkinga zomshwalense uyasebenza noma kunothaqa, lokhu kuqinisekiswe nguNksz Jennifer Preiss we-Ombudsman For Long Term Insurance
“Asikakatholi izikhalo eziningi ezihambisana nesikhathi sikathaqa kodwa siyazithola izincwadi kubantu eziphathelene nazo lezi zinkinga,” kusho uNksz Preiss.
Uma udinga ukuxhumana nabeSouth African Insurance Association ungathumela i-email [email protected] noma ubasheyele ucingo ku-011 726 5381 fax: 011 726 5351.
Ungaxhumana namahhovisi e-Ombudsman For Short Term Insurance ku-086 066 2837 noma uthumele i-email [email protected] noma ubathinte ku-011 426 8900 okuyinombolo yehhovisi likaNksz Ayanda Mazwi.
Sicela ukukhumbuza abafundi abasibhalelayo befisa sibasize ukuxazulula izinkinga zabathengi ukuthi kumqoka ukuthi bathumele i-email nokuthi basinike imininingwane yocingo abatholakala kuyo ukuze silandelele udaba lwabo. Kulukhuni ukulekelela uma singakwazi ukuxhumana nomuntu.
* Ningangithumelela i-email [email protected] noma ningishayele ku-031 308 2741.